Articles Published in July, 2015 | Sagal Radio Services
Daawo Sawiradda: Munaasabadda 1-da Luulyo oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho
Waxaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho Munaasabadda 1-da Luulyo oo ah markii Gobolada Koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo israacii Gobollada Waqooyi iyo Koonfur.
Madaxweyne Xasan “Dowladda Soomaaliya marna raali kama ah darbiga Kenya ka dhiseyso xuduuda”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad u jeediyay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo ka hadlay siyaasada, dhaqaalaha, muranka ku saabsan Badda iyo darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda.
Cudurka Ebola oo markale ka dilaacay dalka Liberia
Ugu yaraan labo ruux ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhacay cudurka Ebolaha markii ugu horeysay muddo toddobo toddobaad ah wadanka ku yaal Galbeedka Afrika ee Liberia.
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug oo maanta Khudbado jeedinaya
Standardmedia • News Report • July 2, 2015
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta lagu wadaa inay khudbad ku saabsan waxqabadkooda ka hor-jeediyaan Baarlamaanka Maamulka Galmudug, iyadoo 4-ta bisha lagu wado inay dhacdo doorashada Madaxweynaha.
Wararkii ugu dambeeyay Cadaado iyo 6 Musharax oo isugu soo haray Tartanka Madaxweynaha Galmudug
Waxaa la soo gaba gabeeyay khudbadaha Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug ay ka hor-jeedinayeen Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, iyadoo lix musharax kaliya ay isugu soo hartay Tartanka Doorashada kadib markii Guddiga doorashada uu shaaciyay inay buuxiyeen shuruudihii loogaga baahnaa.
Ururka Boko Haram oo ku diley 80 ruux magaalo ku taal Waqoyi Bari Nigeria
Ugu yaraan 80 ruux ayaa lagu diley magaalada Kukawa ee Waqoyi Bari Nigeria kadib markii ay weerareen dabley hubeysan masaajidyo ay ku tukunayeen dad Muslimiin ah.